Madaxweynaha Jabuuti oo Baarlamaanka Soomaaliya ku booriyey inuu midnimo raadiyo – Kalfadhi
Madaxweynaha Jabuuti oo Baarlamaanka Soomaaliya ku booriyey inuu midnimo raadiyo
Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa maanta la wadaagay Baarlamaanka Soomaaliya inuu aad uga xun yahay khilaafka u dhaxeeya ee ku aadan inuu hakad ku jiro wada-shaqeyntooda, taas oo uu 2 bil ka hor ku dhawaaqay Golaha Aqalka Sare, una soo jeediyey Madaxweynaha Soomaaliya inuu xaliyo, laakiin wali waa sidiisii.
Madaxweyne Geelle, oo maanta Xarunta Dugsiga Tababarka Ciidanka Booliska ee Jeneraal Kaahiye ku la hadlayey Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay iney Labada Gole ee Baarlamaankaba la gudboon tahay in ay isu-tanaasulaan, gartaana in ay iskula shaqeeyaan sharciga u qoran iyo Dastuurka Ku-meel-gaarka ah.
“Waa inaan mar walba maskaxda ku hayno dadkii na doortay waxa ay naga sugayaan, oo ay ka mid tahay inaanan is qabqabsanin” ayuu Madaxweyne Geelle ku yiri Baarlamaanka, oo ay in badan oo ka mid ah xubnihiisa iyo hogaankiisuba maanta wada joogeen Dugsiga Jeneraal Kaahiye. Geelle waxa uu sheegay in ay aad muhiim ugu tahay Baarlamaanka dalka inuu qaato masuuliyad weyn, isagoo ilaalinaya niyadda dadkii soo doortay.
Madaxweynaha Jbauuti waxa uu tusaale ugu soo qaatay Baarlamaanka dayaca haysta Soomaalida oo dhan, gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ama ku barakacsan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo uu u sheegay Baarlamaanka in ay la gudboon tahay inuu aad uga fekero dib u soo celinta noloshoodii ka luntay. “Waa in aan ka fekerno sidii looga saari lahaa barkacayaasha dhibaatada, oo aan dib ugu soo celin lahayn hantidoodii, iyo in weliba sidii hantida dowladda dib loogu soo celin lahaa” ayuu yiri Geelle.
Mudane Geelle waxa uu ku celceliyey sida ay Baarlamaanka Soomaaliya muhiim ugu tahay inuu raadiyo, helo, adkeeyana midnimadiisa. Waxa uu sheegay in waxa uu ugu weyn ee ay tahay inuu ka shaqeeyo ay tahay inuu ilaaliyo midnimadiisa, taasoo ay ku xiran tahay ilaalinta midnimada Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in ay sidaas ka hortageyso in ay shacabku niyad jabaan.
Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa in ay wada-shaqeyntooda soo laabato ka sugayey Madaxweynaha Soomaaliya, mudadii 2-da bil ahayd ee ay Xildhibaannadu ku maqnaayeen fasaxa, hase ahaatee taas wali ma dhicin, waxa uuna u muuqa in iyada oo uu wali sidiisii yahay xaalkoodii wada-shaqeyn xumada ahaa uu furmo Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Aqalka Sare, oo sharraxayey waxa ay isku haystaan Labada Gole ee Baarlamaanka, ayaa horay u sheegay inuu Golaha Shacabku toos ugu geeyo Madaxweynaha xeerarka uu meel-mariyo qaar, sida Miisaaniyadda Qaran, taas oo uu sheegay inuu Aqalka Sare wax ka leeyahay sharciyeynteeda, iyo inuu Golaha Shacabku kaligiis go’aansado inuu dibadda Soomaaliya ku metelo Baarlamaanka Soomaaliya, taas oo uu sheegay in sidoo kale uu Aqalka Sare wax ka leeyahay.
Maxaad ka ogtahay hawlaha shaqo ee guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee golaha wakiillada Puntland?
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ku baaqay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo qaraxii Goof Gaduud